Coral Vita nke sitere na Bahamas nwetara ihe nrite nke Prince William nke Earthshot
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Bahamas Breaking » Coral Vita nke sitere na Bahamas nwetara ihe nrite nke Prince William nke Earthshot
Akụkọ Bahamas Breaking • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Caribbean • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Ịrụ ọrụ • Sustainability News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Bahamas Ministry of Tourism, Investments & Aviation na-ekele ụlọ ọrụ Grand-Bahama Coral Vita maka imeri ihe nrịba ama nke Earth William na Prince William na paụnd Alexandra na London na Sọnde gara aga. The Royalshot Prize nke £ 1 nde ka Royal Foundation na -enye ndị mmeri ise kwa afọ maka ụzọ ọhụrụ ha si edozi nsogbu gburugburu. A na-enye ihe nrite na ngalaba ise: "Chebe ma weghachite okike," "tụte n'oké osimiri anyị," "hichaa ikuku anyị," "wulite ụwa na-enweghị ihe mkpofu" na "mezie ihu igwe anyị." N'etiti ndị mmeri ise nwetara onyinye ise mbụ, e nyere ndị otu Coral Vita ihe nrite £ 1 nde na ngalaba '' ịtụte n'oké osimiri anyị ''.
Atụmatụ sayensị nke dabere n'àgwàetiti Grand Bahama enwetala nkwado zuru ụwa ọnụ maka mmetụta ọ na -enwe maka idozi mmetụta nke okpomoku zuru ụwa ọnụ na oke osimiri nke ụwa.
Coral Vita nwere ike itolite coral ihe ruru ugboro 50 ngwa ngwa karịa ka ọ na -eto na okike, ebe ọ na -eme ka ike gwụ megide acidifying na oke osimiri.
Ụlọ ọrụ ahụ na -amụba okpukpu abụọ dị ka ebe a na -ahụ maka mmiri ma nwee aha ọma dị ka ebe ndị njem.
Mgbe ọ natara ozi nrite nke Earthshot nke enyere Coral Vita, onye isi ụlọ ọrụ nke njem nlegharị anya, itinye ego na ụgbọ elu Joy Jibrilu kwuru, "Dịka mba, ọ na -enye anyị nnukwu nganga na atụmatụ sayensị dabere n'àgwàetiti Grand Bahama nwere. nwetara nkwado zuru ụwa ọnụ maka mmetụta ọ na -enwe iji belata mmetụta nke okpomoku zuru ụwa ọnụ na oke osimiri ụwa. ”
N'afọ 2018, Sam Teicher na Gator Halpern, ndị guzobere Coral Vita, wuru ugbo coral na Grand Bahama iji lụso mgbanwe ihu igwe. nke dị na Bahamas. Ụlọ ọrụ ahụ na -amụba okpukpu abụọ dị ka ebe a na -ahụ maka mmiri ma nwee aha ọma dị ka ebe ndị njem. Otu afọ ka ọ malitesịrị ụlọ ọrụ a, Hurricane Dorian bibiri agwaetiti Grand Bahama, nke mere ka mkpebi ụlọ ọrụ ahụ sie ike ịchekwa oke mmiri coral anyị. N'iji ụzọ ọgbara ọhụrụ, Coral Vita nwere ike ito coral ihe ruru ugboro 50 ngwa ngwa karịa ka ọ na -eto n'okike, ebe ọ na -eme ka nnagide megide acidifying na oke osimiri dị ọkụ. Usoro ihe omimi sayensị ndị a mere ka Coral Vita bụrụ onye zuru oke maka nrite nke Earthshot.
Emepụtara Royal Foundation nke Duke na Duchess nke Cambridge Earthshot Prize na 2021. Ebumnuche nke onyinye a bụ ịkwalite mgbanwe ma nyere aka rụkwaa ụwa n'ime afọ iri na -abịanụ.
Kwa afọ, n'ime afọ iri na -abịanụ, a ga -enye ndị na -anụ ọkụ n'obi gburugburu ebe obibi onyinye ise nke otu nde pound, na -atụ anya iweta nsogbu 50 maka nnukwu nsogbu gburugburu ụwa ka ọ na -erule 2030. Achọpụtara ihe karịrị nhọpụta 750 sitere na mpaghara niile nke ụwa. ihe nrite zuru ụwa ọnụ. Enwere ndị ikpeazụ n'agba nke ọ bụla n'ime ngalaba ise a. The Earthshot Prize Global Alliance, netwọ ndị ọrụ ebere, ndị NGO, na azụmaahịa mpaghara nke ụwa niile ga -akwado ndị ga -emecha ngwụcha iri na ise ga -enyere aka dozie azịza ha.
Maka ozi ndị ọzọ na Earthshot pịa ebe a.
Ịlaghachi mmasị ọhụrụ na njem na njem nlegharị anya ọzọ
Germany kwuputara mmachibido iwu ọhụrụ maka…